बाग्लुङमा पहिरोले पुरिएर एकजनाको मृत्यु | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
बाग्लुङमा पहिरोले पुरिएर एकजनाको मृत्यु
July 23, 2019 Nepal E News
गयराति देखी निरन्तर रुपमा परेको अबिरल बर्षा सगैंको पहिरोको कारण गलकोट नगरपालिका बडा नम्बर ८ ज्यामिरेमा पुरीएर एक जनाको ज्यान गएको छ । गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर ८ ज्यामिरे मा मंगलबार बिहान घर तथा गोठ माथिबाट पहिरो झरेपछि गोठ भित्र काम गदैं गरेकी १७ बर्षकी सिता गौतमको पुरीएर ज्यान गएको प्रहरी ले जानकारी दिईएको छ। स्थानिय पिताम्बर गौतमको घर तथा गोठ माथिबाट बिहान करिब साढे ५ बजेको समयमा पहिरो गएको थियो ।
अन्य परिबारका सदस्य भने घरमा रहेकोले सुरक्षित रहेको स्थानियले बताए । पहिरोमा पुरीएकी गौतमकोे करिब १ घण्टा पछि पहिरोबाट शब निकालीएको प्रहरी ले जानकारी दिईएको छ । अहिले भारि बर्षा भैरहेको छ । स्थानियबासि जनप्रतिनिधी लगाएतले उद्धारमा खटिएका छन् । गोठदेखी करिब २० मिटर माथिबाट झरेको पहिरोले गोठमा रहेको एउटा लैनो भैसि एउटा पाडो र २ ओटा बाख्रा पुरीएका छन् ।
अहिले घटना स्थलमा प्रहरी जनप्रतिनिधी राजनैतिक दलका प्रतिनिधी तथा स्थायिबासि सहभागि रहेको स्थानिय ढालेन्द्रप्रसाद गौतमले जानकारि दिनुभयो । निरन्तर भारि बर्षा भरहेको हुदा घर समेत उच्च जोखिममा रहेको छ । गौतम शिब माध्यमिक बिद्यालय राजबगरमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत रहेको स्थानिय ले बताए ।
समाचारबाग्लुङमा पहिरोले पुरिएर एकजनाको मृत्यु
गुल्मीको सत्यवतीमा पहिरोले ९ जनाको मृत्यु, ४ बेपत्ता
अहिले प्राइभेट अस्पतालमा बच्चा जन्मँदा किन अधिकांशको अपरेसन हुन्छ ? साथै, बच्चा जन्मिनेबित्तिकै किन सासको समस्या छ भनेर ‘एनआईसीयू’ मा राखिन्छ ? मैले भोगेको छु ।
अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या तीन हजार नाघेको छ । जोन हप्किन्स युनिभर्सिटीको ताजा आँकडा अनुसार अमेरिकामा अहिलेसम्म कूल तीन हजार ८ व्यक्तिको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै मृत्यु न्यूयोर्क सिटीमा भएको छ । यहाँ ९ सय १४ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ...
काठमाडौं। ‘बहस गरौं, कक्षा १० उत्तीर्ण भइसकेका विद्यार्थी भाइबहिनीलाई फेरि सोही तहको एसईई परीक्षा दिनैपर्ने बाध्यता...